Previous Article A Dụọla Ndị Ụka Ka Ha Na-Ebi Ndụ Ịdị Ọcha, Zèére Ikpasu Chineke Iwe
Next Article A Dụọla Ndị Ọrụ Ugbo n'Anambra Ka Ha Jìkọta Onwe Ha n'Otù
Gọvanọ Obianọ mere ka a mara nke a n'Amawbịa na mmemme nkuzi otu ụbọchị a chịkọbààrà òtù jikọrọ ndị nwere ụlọ nkwari akụ na steeti ahụ, bụ nke a maara dịka 'Anambra State Association of Hotel Owners', site n'aka isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ihe e ji aka eme, ihe na-eme na mba ofesi, omenala na njèm nlegharị anya na steeti ahụ.
Ya bụ aka na-achị achị, nke osote ya bụ Dọkịta Nkem Okeke nọchitere anya ya mere ka a mara njikere ọchịchị ya dị na mbọ dị iche-iche ọ na-agba ime ka steeti ahụ bụrụ ebe mbụ a na-elegara anya maka iwunye akụnụba. Ọ gazịrị n'ihu kpọkuo ụmụafọ Anambra bi na mba ofesi ka ha na-ewelata akụnụba ha n'ụlọ ma na-ewunye ya na steeti ahụ, iji kewàpụtara ndị ntorobịa ohèrè ọrụ, kwàlite ọnụ ego a na-enweta n'ime steeti ahụ, ma sikwazie n'ụzọ dị otu ahụ kwàlite ọnọdụ akụnụba ya bụ steeti.
Na mbụ n'okwu ya, kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka ihe e ji aka eme, ihe na-eme na mba ofesi, omenala na njèm nlegharị anya, bụ oriakụ Sally Mbànefo, kọwapụtara mkpà ọ dị iwunye akụnụba na ngalaba njem nlegharị anya n'ihi úrù dị iche-iche dị na ya, dịka o siri metụta ịkwalite ọnọdụ akụnụba. Ọ rụtụsịrị aka n'ebe dị iche-iche e nwere ihe nlegharị anya na steeti ahụ, nke gụnyere Ọgbà Ogbunike na Ọgbà Nkwelle–Ezunanka, ma kwuo na iwunye akụnụba n'ụdị ihe ndị ahụ ga-enye aka n'ịkwalite njem nlegharị anya na ego a na-enweta n'ime steeti ahụ.
Na ntụnye nke ya, onyeisi ndị òtù ahụ, bụ maazị Godwin Okonkwọ kọwara mmemme ahụ na ndụmọdụ ahụ dịka nke magburu onwe ya, ma kọwaa nke ahụ dịka ohere ọma na ohere ọhụụ nyé ha bụ ndị nwere ụlọ nkwari akụ na steeti ahụ; ma kwekwazie nkwà na ha ga-aga n'ihu n'ijìkọ aka ọnụ, ha na ọchịchị steeti ahụ, n'ime ka ya bụ steeti bụrụ eji ama atụ n'ihe gbasaara ọnọdụ akụnụba na njem nlegharị anya.